Ny fampiasana sy ny olana misy amin'ny vera tsy misy afo eo amin'ny sehatry ny fananganana / 2
1. ny karazany sy ny fampiharana ny fizara-baravarankely tsy mirehitra Araka ny GB / T12513-2006 "Fomba fitsapana afo ho an'ny Components voaravaka fitaratra", ny fizara-pitaratra misy afo-afo dia mizara ho karazana insulation thermal sy karazana insulation tsy misy hafanana araky ny fanoherana ny afo , raha ny filazan'ny publ ...
Ny fampiasana sy ny olana misy amin'ny vera tsy misy afo eo amin'ny sehatry ny fananganana / 1
Miaraka amin'ny fampivoarana haingana ny toekarena, ny tranobe, indrindra ny trano fivarotana, dia natao ho lehibe sy lehibe kokoa. Ao amin'ny tanàna onenan'ilay mpanoratra, tranobe lehibe 5 misy 300 000 metatra toradroa mahery no naorina tao anatin'ny herintaona. Ny endrika fisorohana afo amin'ny tranobe lehibe toy izany dia ny ...
Ny varavarana sy ny orinasa Windows dia hampiasa ny kalitaon'ny vokatra handresena ny tsena
Amin'izao fotoana izao, ny mpanjifa dia matoky ny marika somary lalina, rehefa mividy varavarana sy ny vokatra Windows dia mety hirona amin'ny vokatra marika lehibe, ary hitranga tampoka ny krizy. Fa raha ampitahaina amin'ny marika am-baravarana sy varavarankely, mba hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa azy dia tena importan ...
Inona no mampiavaka ny fitaratra amin'ny fitaratra manavotra angovo?
Ny toetra mampiavaka ny vera fisaka poakaty 1, ny insulated hafanana 1) ny insulated heat hollow: ny vera fitahirizana angovo mahery vaika dia mandray ny firafitra tsara indrindra A + 12 + A, ary ny elanelam-habaka dia. Ny angona fanandramana dia mampiseho fa raha ny elanelan'ny vera tsy misy afovoany dia 12mm, ny vokatra azo avy amin'ny angovo feno dia ny ...
Fa maninona no miseho ilay triatra aorian'ny fitambaran'ilay vera poaka?
Miaraka amin'ny maha-zava-dehibe ny fitsitsiana angovo ao amin'ireo tranobe ao Shina, ny vera mitafy toy ny vokatra fitsitsiana angovo dia mahazatra kokoa amin'ny fampiharana varavarana fananganana, Windows ary rindrina ridao. Noho ny ambaratonga teknika ambany amin'ny famokarana fitaratra fitaratra sy ny tsenan'ny tsena malalaka, ny ...
Ny fanavaozana ny fahaiza-manao sy ny fitomboana maintso dia hanampy ny orinasa Windows sy varavarana hihazonana ny fizarana tsena
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, rehefa niditra ny vanim-potoana niova ny toekarena anatiny, dia nirongatra ny indostrian'ny varavarana sy ny varavarankely, ary ny "crossover" sy ny "fanovana" no teny lehibe an-tsena. Manoloana ireo mpanamboatra maro sy ny fidiran'ny laika mavitrika dia ny ...
Ahoana no ahafahan'ny trano vita amin'ny vera kely manana fiainana vaovao?
Ny rafitry ny fitaratra dia voan'ny olana maro hatramin'ny namoronana azy. Ny voalohany dia ny toetran'ny vera tsy azo ianteherana, ny tanjaka dia tsy ampy ambony. Ary ny vera vaky dia hamokatra tapa maranitra, mora miteraka fahasimbana; Ny faharoa dia ny vokatry ny fitaratra fitaratra, izay hijanona ...
Ny lamin'ny tsena dia nanova varavarana ary ny indostrian'ny Windows dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fanovana sy fanavaozana ny The Times
Miaraka amin'ny fivoaran'ny The Times tsy miova, ny fiovan'ny tsenan'ny famolavolana trano dia nisy fiovana nampihozongozona ny tany. Eo amin'ny sehatry ny fanavaozana ny lafiny famatsiana, ny fiverimberenana kognitika, ny fanavaozana ny fanjifana, ny indostrian'ny varavarana sy ny varavarankely koa dia miatrika fiovana sy fanavaozana. Ahoana ny fomba hisafidianana ny fut ...
Ny indostrian'ny vera dia tokony hiala amin'ny "adin-tsolika" miaraka amin'ny kalitao avo sy vidiny avo lenta
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny "very-free-for-all, high-end very" dia nanjary toe-javatra mahamenatra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa eo amin'ny sehatry ny famokarana sinoa. Ny "ady amin'ny vidiny" dia fampiasana fitaovana fifaninanana mahazatra, tsy fahita ny indostrian'ny vera. Midika izany fa mety hitondra b ...
Ny varavarana sy ny orinasa Windows hanokatra tsena vaovao dia tokony handinika ny vidin'ny fizarazaran'ny tsena
Amin'izao fotoana izao, ny fampandrosoana ny indostrian'ny varavarana sy ny varavarankely dia nanjary matotra, ary ny fampandrosoana ny varavarana sy ny fikandrana varavarankely dia latsaka tao anatin'ny fotoana fohy. Ahoana no ahafahan'ny orinasan-varavarana sy varavarankely mahazo fanamby amin'ny sehatry ny fampandrosoana vaovao, ary mila manantona ...
Na dia tsara aza ny fahatsinjovan'ny tsena ny varavarana namboarina sy ny Windows, dia tokony hamaky ny bottleneck fampandrosoana ny orinasa
Amin'izao fotoana izao, ny fanovana ny orinasam-baravarana sy ny varavarankely dia tsy fanamby fotsiny, fa koa fotoana iray hanitarana ny fampandrosoana ny varavarana sy ny varavarankely ary ny fanitarana ny tsenan'ireo mpivarotra. Raha te-hanao asa tsara amin'ny tranobe ny orinasam-baravarana sy ny varavarankely ...
Ny vera fiarovana dia lasa toerana mamirapiratra vaovao eo am-baravaran'ny hazo matevina
Dakozia na kabine ity karazana habaka ity dia somary kely ihany, ny jiro dia toerana tsy dia tsara, mazàna amin'ny safidin'ny varavarana dia manolo-kevitra ny hisafidy varavarana hazo matevina misy vera, mba ho azo antoka ny jiro anaty trano, nefa koa afaka mampitombo ny fisehon'ny hazo mafy varavarana. Saingy ity vera kely ity koa dia ...